အလုပ်အကိုင် ပိုကောင်းစေဖို့ သင့်စိတ်ကို ပြုပြင်မယ့် နည်းလမ်း ၄ မျိုး – Gentleman Magazine
အလုပျအကိုငျ ပိုကောငျးစဖေို့ သငျ့စိတျကို ပွုပွငျမယျ့ နညျးလမျး ၄ မြိုး
၁. ဓာတုဗေဒ နည်းလမ်းနဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ရအောင် ကြိုးစားပါ
ပန်းတွေဟာ ရာသီအလိုက်ပွင့်ကြတယ်။ ကြက်ဥတွေ အချိန်တန်ရင် အက်ကွဲပြီး ကြက်ကလေးတွေ ပေါက်ကြတယ်။ သစ်ပင်တွေ ရွက်ဟောင်းချွေ ရွက်သစ်ဝေကြတယ်။ အရာအားလုံးဟာ နေ့တွေ၊ ရာသီတွေရဲ့ စည်းဝါးအတိုင်း ဖြစ်နေရတာပါ။ သင့်ကိုယ်သင်လဲ ရာသီစက်ဝိုင်းထဲက လွတ်ကင်းနေပြီ မထင်ပါနဲ့။
သင့်ရဲ့ ဇီဝနာရီကို ထိန်းချုပ်တဲ့ နေရာကတော့ မျက်လုံးအိမ်အနောက် Hypothalamus မှာ ရှိတဲ့ အာရုံကြော အစု သေးသေးလေး နှစ်ခုပါ။ ဦးနှောက်ရဲ့ အဲဒိ ဧရိယာဟာ သင့်ကို တက်ကြွစေမလား၊ ထုံထိုင်းစေမလားဆိုတာ အဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေကို ဟော်မုန်း level တွေနဲ့ ညှိပြီး လုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။
၁. တက်စတိုစတီရုန်း လယ်ဗယ် မြင့်နေတဲ့ အချိန်ပါ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လှုပ်ရှားဖို့ သင့်တော်ပြီး အကြွေးတောင်းတဲ့ Email တွေလို စာတွေ ရေးဖို့ အကောင်းဆုံးပါ။
၂. စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း Cortisol လယ်ဗယ် ကျနေချိန်ပါ။ အစည်းအဝေးစတွေ လုပ်ဖို့ သင့်တော်ပြီး ခေါင်းအေးအေးနဲ့ ဆွေးနွေးတာတွေကို လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၃. အိပ်စက်ခြင်းဟော်မုန်း Melatonin စတင်ထွက်လာချိန်ပါ။ တီထွင်ဖန်တီးဉာဏ်နဲ့ မှတ်ဉာဏ် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ကြာရှည်မှတ်ရမယ့် ကိစ္စတွေ မှတ်သားလုပ်ကိုင်ဖို့နဲ့ စာကျက်ဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
၂. သင် လုပ်တဲ့ အလုပ်ကို ချစ်ခင်နှစ်သက်ပါစေ
အလုပ်အကိုင် လုပ်တာဟာ ပင်ပန်းနေဖို့ သီးသန့်မဟုတ်ပဲ အလုပ်ကို ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖို့ လိုပါသေးတယ်။ အဲဒိလို ဖြစ်နိုင်စေမယ့် အကြောင်းတွေကတော့
သင် လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ရဲ့ တိုးတက်မှုတိုင်းကို သိအောင်လုပ်ပြီး အချိုးအကွေ့တစ်ခုတိုင်းမှာ ကိုယ့်ဘာသာ ဆုချီးမြှင့်ခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ရတာ ပျော်စရာပိုကောင်းပြီး အားပိုတက်စေပါတယ်။
အပျော်ရွှင်ဆုံး လူတွေဟာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အလုပ်ကို အပေါ်က Boss ရဲ့ Permission အမြဲတောင်းနေစရာမလိုပဲ လုပ်နေရတဲ့ သူတွေပါ။ အဲဒိလို လူမျိုးတွေဟာ တစ်နေ့ပြီးတဲ့ လုပ်ငန်းကို အလုပ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ခံစားရတာ မဟုတ်ပဲ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို ခံစားနေရတတ်ပါတယ်။
သင် တတ်နိုင်ရင် အလုပ်ခွင်မှာ သင် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်လောက် ရှာပြီး တူတူ အလုပ်တွဲလုပ်ခြင်းဟာ အလုပ်ကို ပိုပြီး ပျော်ဖို့ ကောင်းစေပါတယ်။
သင်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို မကြိုက်ရင် ချက်ခြင်း ထွက်ပြီး အလုပ်သစ်ရှာပါ။ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အလုပ်မှာ တစ်နှစ်လုပ်လိုက်ရတာဟာ တစ်သက်လုံးစာ နောင်တကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
သင်အောင်မြင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဟာ ကိုယ်ကျိုးမကြည့်တဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေ ထားဖို့ပါပဲ။ ဒီအလုပ်က ငါ့အတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲအစား ငါ ဒီအလုပ်ကိုသုံးပြီး ဘာလုပ်နိုင်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
၃. အလုပ်ခွင်မှာ အိပ်ပါ
အလုပ်ခွင်မှာ မှေးနေတာက အကြည့်ရဆိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေ့လည်ပျင်းစရာကောင်းချိန်၊ လေးတိလေးကန် ဖြစ်ချိန်တွေမှာ ကော်ဖီဆက်တိုက် သောက်တာထက်စာရင် မိနစ်အနည်းငယ်လောက် မှိန်းနေလိုက်တာက အကျိုးပိုရှိပါတယ်။ ခဏလောက် မှိန်းလိုက်ရင် ပြန်နိုးလာတဲ့အခါ လုံးဝ လန်းဆန်းနေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
၄. မျက်လုံးကောင်းအောင် ထားပါ
ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ စကရင်ကို တစ်နေ့လုံးကြည့်နေရလို့ ပင်ပန်းတာ၊ မျက်စိမှုန်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာတွေကို တိုက်ဖျက်ချင်ရင် F.Lux ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်ကို သုံးကြည့်ပါ။ ညရောက်လာတာနဲ့ သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်ကို အတင်းနှိုးနေတဲ့ အပြာရောင်အလင်းတွေကို သင့်စကရင်ကနေ ဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မယ်။ Android ဖုန်းမှာဆိုရင် Twilight ဆိုတဲ့ App ကို Play Store က ရှာသုံးကြည့်ပါ။
၁. ဓာတုဗဒေ နညျးလမျးနဲ့ ပြျောရှငျတဲ့ နတေ့ဈနရေ့အောငျ ကွိုးစားပါ
ပနျးတှဟော ရာသီအလိုကျပှငျ့ကွတယျ။ ကွကျဥတှေ အခြိနျတနျရငျ အကျကှဲပွီး ကွကျကလေးတှေ ပေါကျကွတယျ။ သဈပငျတှေ ရှကျဟောငျးခြှေ ရှကျသဈဝကွေတယျ။ အရာအားလုံးဟာ နတှေ့ေ၊ ရာသီတှရေဲ့ စညျးဝါးအတိုငျး ဖွဈနရေတာပါ။ သငျ့ကိုယျသငျလဲ ရာသီစကျဝိုငျးထဲက လှတျကငျးနပွေီ မထငျပါနဲ့။
သငျ့ရဲ့ ဇီဝနာရီကို ထိနျးခြုပျတဲ့ နရောကတော့ မကျြလုံးအိမျအနောကျ Hypothalamus မှာ ရှိတဲ့ အာရုံကွော အစု သေးသေးလေး နှဈခုပါ။ ဦးနှောကျရဲ့ အဲဒိ ဧရိယာဟာ သငျ့ကို တကျကွှစမေလား၊ ထုံထိုငျးစမေလားဆိုတာ အဆုံးအဖွတျပေးပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ အလုပျအကိုငျတှကေို ဟျောမုနျး level တှနေဲ့ ညှိပွီး လုပျကိုငျသငျ့ပါတယျ။
၁. တကျစတိုစတီရုနျး လယျဗယျ မွငျ့နတေဲ့ အခြိနျပါ။ လှတျလှတျလပျလပျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး လှုပျရှားဖို့ သငျ့တျောပွီး အကွှေးတောငျးတဲ့ Email တှလေို စာတှေ ရေးဖို့ အကောငျးဆုံးပါ။
၂. စိတျဖိစီးမှုဟျောမုနျး Cortisol လယျဗယျ ကနြခြေိနျပါ။ အစညျးအဝစေတှေ လုပျဖို့ သငျ့တျောပွီး ခေါငျးအေးအေးနဲ့ ဆှေးနှေးတာတှကေို လုပျနိုငျပါလိမျ့မယျ။
၃. အိပျစကျခွငျးဟျောမုနျး Melatonin စတငျထှကျလာခြိနျပါ။ တီထှငျဖနျတီးဉာဏျနဲ့ မှတျဉာဏျ အကောငျးဆုံးဖွဈပွီး ကွာရှညျမှတျရမယျ့ ကိစ်စတှေ မှတျသားလုပျကိုငျဖို့နဲ့ စာကကျြဖို့ သငျ့တျောပါတယျ။
၂. သငျ လုပျတဲ့ အလုပျကို ခဈြခငျနှဈသကျပါစေ
အလုပျအကိုငျ လုပျတာဟာ ပငျပနျးနဖေို့ သီးသနျ့မဟုတျပဲ အလုပျကို ခဈြခငျနှဈသကျဖို့ လိုပါသေးတယျ။ အဲဒိလို ဖွဈနိုငျစမေယျ့ အကွောငျးတှကေတော့
သငျ လုပျနတေဲ့ အလုပျရဲ့ တိုးတကျမှုတိုငျးကို သိအောငျလုပျပွီး အခြိုးအကှတေ့ဈခုတိုငျးမှာ ကိုယျ့ဘာသာ ဆုခြီးမွှငျ့ခွငျးဖွငျ့ အလုပျလုပျရတာ ပြျောစရာပိုကောငျးပွီး အားပိုတကျစပေါတယျ။
အပြျောရှငျဆုံး လူတှဟော ကိုယျ့စိတျကွိုကျအလုပျကို အပျေါက Boss ရဲ့ Permission အမွဲတောငျးနစေရာမလိုပဲ လုပျနရေတဲ့ သူတှပေါ။ အဲဒိလို လူမြိုးတှဟော တဈနပွေီ့းတဲ့ လုပျငနျးကို အလုပျရဲ့ အစိတျအပိုငျးအဖွဈ ခံစားရတာ မဟုတျပဲ ကိုယျတိုငျရဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခုလို ခံစားနရေတတျပါတယျ။
သငျ တတျနိုငျရငျ အလုပျခှငျမှာ သငျ ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ သူငယျခငျြး နှဈယောကျလောကျ ရှာပွီး တူတူ အလုပျတှဲလုပျခွငျးဟာ အလုပျကို ပိုပွီး ပြျောဖို့ ကောငျးစပေါတယျ။
သငျလုပျနတေဲ့ အလုပျကို မကွိုကျရငျ ခကျြခွငျး ထှကျပွီး အလုပျသဈရှာပါ။ ကိုယျမကွိုကျတဲ့ အလုပျမှာ တဈနှဈလုပျလိုကျရတာဟာ တဈသကျလုံးစာ နောငျတကို ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။
သငျအောငျမွငျဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးဟာ ကိုယျကြိုးမကွညျ့တဲ့ မြှျောမှနျးခကျြတှေ ထားဖို့ပါပဲ။ ဒီအလုပျက ငါ့အတှကျ ဘာလုပျပေးနိုငျသလဲအစား ငါ ဒီအလုပျကိုသုံးပွီး ဘာလုပျနိုငျသလဲဆိုတာ စဉျးစားကွညျ့ပါ။
၃. အလုပျခှငျမှာ အိပျပါ
အလုပျခှငျမှာ မှေးနတောက အကွညျ့ရဆိုးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နလေ့ညျပငျြးစရာကောငျးခြိနျ၊ လေးတိလေးကနျ ဖွဈခြိနျတှမှော ကျောဖီဆကျတိုကျ သောကျတာထကျစာရငျ မိနဈအနညျးငယျလောကျ မှိနျးနလေိုကျတာက အကြိုးပိုရှိပါတယျ။ ခဏလောကျ မှိနျးလိုကျရငျ ပွနျနိုးလာတဲ့အခါ လုံးဝ လနျးဆနျးနတော တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
၄. မကျြလုံးကောငျးအောငျ ထားပါ
ဖုနျး၊ ကှနျပြူတာ စကရငျကို တဈနလေုံ့းကွညျ့နရေလို့ ပငျပနျးတာ၊ မကျြစိမှုနျတာ၊ ခေါငျးကိုကျတာတှကေို တိုကျဖကျြခငျြရငျ F.Lux ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမျကို သုံးကွညျ့ပါ။ ညရောကျလာတာနဲ့ သငျ့ရဲ့ ဦးနှောကျကို အတငျးနှိုးနတေဲ့ အပွာရောငျအလငျးတှကေို သငျ့စကရငျကနေ ဖယျရှားပေးပါလိမျ့မယျ။ Android ဖုနျးမှာဆိုရငျ Twilight ဆိုတဲ့ App ကို Play Store က ရှာသုံးကွညျ့ပါ။
Previous: လိင်မှုကိစ္စအကြောင်း သိကောင်းစရာ အချို့
Next: သူဌေးဖြစ်ဖို့ နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်များ